PHOTOS | News, Art and Ideas For Burma
မြန်မာ့ရိုးရာ သောက်စရာ ထန်းရည်ကိုသာ အားပေးပါ
Filed under: MY WRITINGS, PHOTOS — Nyo Gyi @ 1:40 pm
ဘီယာ မသောက်တော့ဘူး ။
ထန်းရည်ပဲ ပြောင်းသောက်မယ် ။
” မြန်မာ့ရိုးရာ သောက်စရာ
ထန်းရည်ကိုသာ အားပေးပါ “
ဗမာ ထန်းရည်သည် … ဒို့ အရည်
ဗမာ ထန်းပင်သည် … ဒို့ အပင်
ဗမာ ထန်းလျက်သည် … ဒို့ ထန်းလျက် ။
ဒို့ ထန်းရည်ကို … ချစ်ပါ
ဒို့ ထန်းပင်ကို … မြတ်နိုးပါ
ဒို့ ထန်းလျက်ကို … စားကြပါ ။
(မှတ်ချက်။ တန်ဆေး လွန်ဘေး)
(ထန်းပင်မြစ်သည် ဒို့ အမြစ် ဟု ကို Minn Thaik မှ ထပ်မံ ဖြည့်စွက်ပေးပါသည်။ :P)
(နောက်ခံ ဓာတ်ပုံက အိမ်ရှေ့ မင်းထန်းတောကို ရောက်ဖူးသခိုက် Nyo Gyi ရိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးပါခင်ဗျ။)
Filed under: MY POEMS, PHOTOS, SATIRE, USDP — Nyo Gyi @ 3:12 pm
Sai Kham Leik (2008)
Filed under: PHOTOS — Nyo Gyi @ 8:04 pm
ဆရာ စိုင်းခမ်းလိတ်အား ဆရာ စိုင်းခမ်းလိတ်၏ နေအိမ်တွင် တွေ့ဆုံခဲ့ရစဉ် (၂၀၀၈ ခုနှစ်)
© Nyo Gyi
Sai Kham Leik’s Home in Mandalay
From Nyo Gyi‘s Once Upon A Time Photo Album of facebook
Myanmar Flag Color and International Day of Peace
Filed under: DAYS TOPICS, Peace, PHOTOS, UNITY IS STRENGTH — Nyo Gyi @ 4:58 pm
The Campaign for Nuclear Disarmament (CND) symbol, designed by Gerald Holtom in 1958. It later becameauniversal peace symbol used in many different versions worldwide.
လသာ (China Town in Yangon)
Filed under: MY POEMS, PHOTOS, Yangon — Nyo Gyi @ 3:52 pm
China Town in Yangon (September, 2012)
“လ” တကယ် သာပါရဲ့လား…။
(Nyocam Album မှ အခြား ဓာတ်ပုံများအား
Show fist under Longyi
Filed under: INTRODUCTION MYSELF, PHOTOS — Nyo Gyi @ 7:00 pm
ပုဆိုးခြုံထဲက လက်သီးပြနေသော ညိုကြီး
It isaBurmese Proverb.
(Showing ‘Latt Thee’ from the inside of ‘Pa Soe’)
Thanksalot my friends for translating.
ကျွန်တော့် Blog လေး Update မလုပ်နိုင်တာ တကယ်လွမ်းမိ၊ သတိရမိပါတယ်။ Blog ထက် facebook မှာ အသုံးများနေလို့ပါ။ အင်တာနက်လောကမှာတော့ ကျွန်တော်ရှိနေဆဲပါ။ တော်တော်များများကို facebook မှာပဲ တင်ဖြစ်၊ Share ဖြစ်နေပါတယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ facebook လေးကိုလည်း လာလည်ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
Filed under: MY NEWS, PHOTOS — Nyo Gyi @ 9:41 am
မဲဘယ်လိုခိုး၊ ဘယ်လိုလိမ်ကြသလဲ (၁) – How Military+USDP Government Make Fake Vote for 2012 By-Election
Filed under: Election, MY NEWS, NLD, PHOTOS, USDP — Nyo Gyi @ 1:00 am
Fake Vote Created by USDP for 2012 by-Election
အသည်းကြားက မဲတစ်ပြားဟု ဆိုကြ၏။ ဆိုလိုသည်မှာ မဲတစ်ပြား၏ တန်ဖိုးကြီးပုံ၊ အရေးကြီးပုံကို တင်စားပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပေသည်။ မှန်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်ကို ပြုပြင်ဖန်တီးမည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကို ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရာ၌ မဲတစ်ပြားသည် လွန်စွာမှ တန်ဖိုးကြီး၏။ အရွေးမှားက ခွေးများဖြစ်သွားနိုင်၏။
ကျွန်ုပ်တို့ကို ဖိနှိပ်လိုသူများကလည်း နည်းမျိုးစုံဖြင့် ခိုးကြလိမ်ကြ၏။ တစ်တိုင်းပြည်လုံး ဖက်ဆစ်စနစ်ကို အလိုမရှိသဖြင့် တွန်းလှန်ဖြိုဖျက်နေသည့်ကြားမှ ထိုလူများနှင့် ထမင်းဝနေသော (သို့မဟုတ်) အရိုးအရင်းအရင်းစုတ်ရသူများက ထိုစနစ်၊ ထိုလူတို့ကို ပံ့ပိုးကူညီ လိမ်လည်ခိုးဝှက်ပေးကြ၏။
ထိုသည်လည်း အပြစ်မဆိုသာပါပေ။ ဂျပန်ခေတ်၌ ဂျပန်အလိုတော်ရိ၊ အင်္ဂလိပ်ခေတ်မှ အင်္ဂလိပ်အလိုတော်ရိတို့ကို မသိအောင်ရှောင်ရှား၍ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့သည်ပင် လွတ်လပ်ရေးရအောင် ကြိုးပမ်းခဲ့ရသေးသည် မဟုတ်ပါလော။
ယခု မန္တလေးတိုင်း၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ် လစ်လပ်သော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာ ရွေးချယ်ရာ၌ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် နည်းမျိုးစုံနှင့် မဲလိမ်မဲခိုးပြုလုပ်၏။ သူတို့ မဲခိုးမဲလိမ်နည်းတစ်ခုမှာ ဤသို့ဖြစ်၏။ သူတို့ကြံ့ခိုင်ရေးသို့ သေချာပေါက် မဲထည့်မည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကို အကွက် (၂၈၉)၌လည်း မဲစာရင်းထည့်ထား၏။ ထိုနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင် အကွက် (၂၉၄)၌လည်း မဲစာရင်းထည့်ထား၏။ ဤသို့ထည့်ခြင်းဖြင့် တစ်နေရာ မဲအတွက် ကြိုတင်မဲယူ၍ တစ်နေရာ၌ လူကိုယ်တိုင်သွားရောက်ထည့်၏။ ဤသို့ဖြင့် ကြံ့ခိုင်ရေးမဲရအောင် ကြံစည်ကြ၏။ အတိုက်အခံဘက် ထည့်မည်ဟု သေချာသော မဲဆန္ဒရှင်များကိုတော့ မေ့တာလိုလို၊ အသက်မပြည့်တာလိုလိုနှင့် မဲစာရင်း၌ ချန်ခဲ့၏။ သွားရောက်ပြောသောအခါ သေချာစိစစ်ပါဦးမည်။ လေးရက်လောက်စောင့်ပါဟု ပြော၏။ သူတို့ချန်ခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်မှာ အသက်မပြည့်သေးပြောရအောင်ကလည်း ကလေး နှစ်ယောက်ပင်ရ၍ သားသမီးသည်ပင် အမှတ် ၁၄ ကျောင်း၌ ကျောင်းတက်နေပေပြီ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အရမ်းစွပ်စွဲ အပုပ်ချသည်မဟုတ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စူးရှထက်မြက်လှသော သတင်းထောက်များမှ တစ်ဆင့် ခိုင်လုံသော သတင်းအချက်အလက်တို့ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ရပေပြီ။
ဥပမာ- မဟာအောင်မြေမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်မှ ဆန္ဒမဲအမှတ်စဉ် (၅၃၉၆) ဦးရဲကျော်သူ (၉/မဟမ(နိုင်)၀၀၁၅၂၇ သည် အကွက် ၂၈၉ ၌လည်း မဲဆန္ဒစာရင်းပါ၏။ အကွက် ၂၉၄ ၌လည်း ကိုရဲကျော်သူ (၉/မဟမ(နိုင်)၀၀၁၅၂၇) အမှတ်စဉ် (၅၉၂၀)ဟု ပါပြန်၏။ ထို၌ မွေးသက္ကရာဇ် ၃-၂-၁၉၇၄ အစား ၉-၀၈-၁၉၇၃ ဟု ပြောင်းထားသည်သာ ကွာ၏။
ထိုကဲ့သို့ပင် အမှတ်စဉ် (၅၈၇၉) ကိုသိန်းထိုက်၊ (၅၈၈၀) မယဉ်ယဉ်ဝင်း၊ (၅၈၈၁) မောင်စိုင်းဝဏ္ဏတို့သည် အကွက် ၂၉၄ ၌ မဲဆန္ဒစာရင်းဖော်ပြထားသလို အမှတ်စဉ် (၅၄၄၈)၊ (၅၄၄၉)၊ (၅၄၅၀) ၌လည်း အကွက် ၂၈၉ အတွက် မဲစာရင်းဖော်ပြထားပြန်၏။ မှတ်ပုံတင် နံပတ်များမှာ မပြောင်းလဲ။ ဖွားသက္ကရာဇ်များကိုမူ ယခင် ရဲကျော်သူ ကဲ့သို့ပင် ပြောင်းလဲထား၏။
ကိုသိန်းထိုက်သည် တစ်နေရာ၌ ၉-၃-၁၉၇၂ ဖြစ်၍ အကွက် ၂၉၄ ၌ ၉-၁၀-၁၉၇၂ ဖြစ်၏။ မယဉ်ယဉ်ဝင်းသည် အကွက် ၂၈၉ ၌ ၁၂-၁-၁၉၇၄ မွေးဖြစ်၍ အကွက် ၂၉၄ ၌ ၇-၀၄-၁၉၇၄ မွေးဖြစ်၏။ သူတို့၏သား မောင်စိုင်းဝဏ္ဏမှာ အကွက် ၂၈၉ ၌ ၁၀-၉-၁၉၉၂ ဖြစ်၍ အကွက် ၂၉၄ ၌ ၂၈-၄-၁၉၉၂ ဖြစ်၏။ ဆက်လက်စုံစမ်းသိရှိရသည်မှာ သူတို့မိသားစုသည် မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ ဒေးဝန်းအရှေ့ရပ်ကွက် မဲဆန္ဒကော်မရှင်ဥက္ကဌ၏ တူများဖြစ်ကြောင်း သိရှိရ၏။
ထို့အတူ ဆန္ဒမဲအမှတ်စဉ် (၅၇၅၈) ကိုမိုးဇော်ဦး၊ အမှတ်စဉ် (၅၇၅၉) မခင်မျိုးဝင်းတို့သည်လည်း အကွက် ၂၉၄ ၌ တစ်ခါပါ၏။ အကွက် ၂၉၄ ၌ပင် အမှတ်စဉ် (၅၉၁၈)၊ အမှတ်စဉ် (၅၉၁၉) တို့တွင်လည်း ကိုမိုးဇော်ဦး၊ မခင်မျိုးဝင်းတို့ ထပ်ပါပြန်၏။
ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ဖော်ထုတ်နိုင်သေးသော လတ်တလော စာရင်းသာဖြစ်၏။ သူတို့ဆွေမျိုးများကို အသက်မပြည့်သေးဘဲ ထည့်ထားသည်မှာ ဘယ်မျှ ကျွန်ုပ်တို့ မသိနိုင်သေး။ အတွင်းရေးမှူးဆိုသူများ၏ ဆွေတော်အပေါင်း၊ မျိုးတော်ရှစ်သောင်းကိုလည်း မဖော်ထုတ်နိုင်သေး။
မဲတစ်ပြား၏ တန်ဖိုး မည်မျှရှိသည်ကို မဲရေတွက်ရာ၌ သိနိုင်၏။ ယခုပင် ၁၂ မဲမျှတွေ့ရပေပြီ။ ၁၂ မဲ နှစ်ပြန်ဆိုလျှင် ၂၄ မဲ။ ဤသို့ ပြန်ကြည့်လျှင် ခေါက်ချိုးတက်၍ သွားပေမည်။ ကင်းဝန်မင်းကြီး ဆန်ကို နှစ်ပြန်စားသလို ဖြစ်မည်ကို ပြည်သူအပေါင်း သတိကောင်းကောင်းထား၍ စောင့်ကြည့်ဖော်ထုတ်သင့်ပေကြောင်း တင်ပြအပ်ပေသည်။
DTP by Nyo Gyi
(PDF ဖိုင်အား Download ရယူချင်သူများအတွက်
တွင် Upload တင်ထားပါကြောင်း…)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မန္တလေးခရီးစဉ် ဓာတ်ပုံများ – Mother Suu’s Mandalay Trip (Photos)
Filed under: DAW AUNG SAN SU KYI, MY NEWS, NLD, PHOTOS — Nyo Gyi @ 2:44 pm
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မန္တလေးခရီးစဉ် ဓာတ်ပုံများ
From Daw Aung San Suu Kyi in Mandalay
အခြားပုံများကို အောက်က လင့်ခ်မှာ သွားကြည့်ပါ။
Facebook မှာလည်း တင်ထားပါတယ်။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအား မန္တလေးလူထု တစ်ခဲနက်ထောက်ခံကြိုဆို – 88 Generation Students in Mandalay (Photos)
Filed under: 8888, MY NEWS, PHOTOS, SEPTEMBER GOLDEN REVOLUTION — Nyo Gyi @ 6:22 am
မန္တလေးရောက် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ၏ ဓာတ်ပုံများအား Nyo Gyi ၏ Facebook တွင် အားပါးတရ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
88 Generation Students in Mandalay
By Nyo Gyi (Albums)